တောဘဲမန်ဒါလီ - ဝီကီပီးဒီးယား
Anas moschata လင်းနီးယပ်, ၁၇၅၈
တောဘဲမန်ဒါလီသည် ‘ အန်စာရီ‌ဖောမီး ’ မျိုးစဉ် တွင်လည်းကောင်း၊ ‘ အနာတီဒီ ’ မျိုးရင်း တွင်လည်းကောင်း၊ ‘ကိုင်ရီနီနီး ’ မျိုးရင်းခွဲ တွင်လည်းကောင်း ပါဝင်သည်။ ဝမ်းဘဲမျိုး အ‌မြောက်အမြားရှိရာတွင် ‌တောဘဲလည်း အပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ‌တောဘဲတွင် ပြား‌သောနှုတ်သီးနှင့် အသင့်အတင့်ရှည်‌သော ‌ခြေ‌ချောင်းများရှိသည်။ ‌ရှေ့‌ခြေ‌ချောင်း ‌လေး‌ချောင်းကြားတွင် အလွှာပါးများရှိ၍ နောက်‌ခြေ‌ချောင်းက‌လေးမှာမူ သီးခြားလွတ်‌နေသည်။ အင်း၊ အိုင်‌၊ ချောင်း၊ မြောင်းတို့၌ အစာရှာ‌ဖွေစား‌သောက်နိုင်သည်။ ‌တောဘဲသည် အများအားဖြင့် ‌ရေချိုတွင် ကျက်စား‌လေ့ရှိသည်။ ‌တောဘဲ၏ အစာများတွင် တီမျိုး၊ အင်းဆက်ပိုး (ပိုး‌ကောင်)နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များပါဝင်သည်။ ‌တောဘဲထီးသည် အလျားလက်မ ၃၀ ခန့်ရှိ၍ ‌တောဘဲမသည် ၂၄ လက်မခန့်ရှိသည်။ အရွယ်ကြီးရင့်သော ‌တောဘဲထီး၏ ကိုယ်အ‌ပေါ်ပိုင်းနှင့် ရင်ပိုင်းရှိ အစိမ်းရောင်သည် ‌နေ‌ရောင်ထဲ၌ အလွန်‌တောက်ပသည်။
သား‌ပေါက်ချိန်တွင် ‌တောဘဲထီး၏ နှုတ်သီး‌အောက်ပိုင်းသည် ‌ဖောင်း၍ နီလာသည်။ အမသည် အထီးထက် အရွယ်ငယ်၍ အ‌ရောင်မှာ အထီးကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲ၊ မွဲ‌ခြောက်‌ခြောက်ဖြစ်သည်။ တောဘဲထီးသည် ‌နေဝင်ချိန်၌ ပျံသန်းခိုက်တွင် သနားစရာကောင်း‌သော အသံဖြင့် နှစ်ဆင့်ထပ်ကာ‌အော်တတ်သည်။ တောဘဲမသည် ပျံသန်းခိုက်၌ ‌လေချွန်သံကဲ့သို့ စူးရှစွာ အော်တတ်သည်။ အမြဲစိမ်း‌တောရှိ ‌ရေအိုင်နှင့်‌ချောင်းများ၌ အများအားဖြင့် တစ်‌ကောင်ချင်းဖြစ်‌စေ၊ စုံတွဲဖြစ်‌စေ ‌တွေ့ရသည်။ ကောင်‌ရေ အများပါရှိ‌သော ‌တောဘဲအုပ်ကိုလည်း တစ်ခါတစ်ရံ တွေ့ရသည်။ ‌ရွှေလီမြစ်တွင် အ‌တွေ့ရများ‌သော ငှက်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
‌တောဘဲသည် ‌ရေအိုင်နှင့် ‌ရေကွက်များတွင်ဖြစ်‌စေ၊ လူသူမနီးသော ‌တောထဲရှိ ‌ရေအိုင် စမ်း‌ချောင်းများတွင်ဖြစ်‌စေ ‌နေ့အချိန်ကို ကုန်လွန်‌စေလျက်၊ ‌နေဝင်ဖျိုးဖျား အချိန်တွင်သာ မြစ်ရိုးသို့ထွက်လာပြီးလျှင် ညအချိန်ကို ကုန်လွန်‌စေဟန်တူသည်။ ထိုနောက် ‌နေထွက်စပြုသည်နှင့်တပြိုင်နက် ‌တောထဲသို့ဝင်‌ရောက်ခို‌အောင်းပြန်သည်။ အရုဏ်တက်ချိန်နှင့် ‌နေဝင်ခါနီး အချိန်တွင် ‌တောဘဲပျံသံကို အများအားဖြင့် ကြားရသည်။ ‌ကျောက်စိမ်းတွင်းများရှိရာ ‌ဒေသတစ်ဝိုက်တွင် ‌နေဝင်ရီတ‌ရောအချိန်၌ တောဘဲများ အချိန်မှန် ပျံသန်းလာကြသည်ကို မြင်နိုင်သည်။ ယင်းတို့သည် စိုစွတ်လျက်ရှိသည့် ရိုးပြတ်‌တောများတွင် အစာကို ရှာ‌ဖွေစား‌သောက်ကြသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ‌တောဘဲတို့၏ အသိုက်ပြုလုပ်ပုံကို ‌ဖော်ပြခြင်းမရှိ‌ပေ။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်မူ သစ်‌ခေါင်းများတွင် အသိုက်ပြုလုပ်‌လေ့ရှိကြသည်။ တောဘဲများကို အာသံပြည်နယ်၌၎င်း၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ဆူမတြားကျွန်းထိ ‌ဒေသတို့၌၎င်း ‌တွေ့နိုင်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တောဘဲများကို ‌မြောက်ပိုင်း၌ အမြဲစိမ်း‌တောများတွင်၎င်း၊ တောင်ဘက်၌ တမူးချိုင့်ဝှမ်း‌မြောက်ပိုင်းအထိ၎င်း၊ မိုးမိတ်နယ်၊ ရွှေလီမြစ်ဝှမ်းတွင်၎င်း၊ ပုသိမ်ခရိုင်တွင်းရှိ အမြဲစိမ်း‌တောရှိရာ ရခိုင်ရိုးမတွင်၎င်း ‌တွေ့ရသည်။ ပဲခူးရိုးမတစ်‌လျှောက်တွင်မူ မ‌တွေ့ရချေ။ အင်းစိန်ခရိုင်နှင့် သာယာဝတီခရိုင်အတွင်းရှိ အမြဲစိမ်း တောများ၌သာ ‌တွေ့ရသည်။
↑ BirdLife International (2012). "Cairina moschata". IUCN Red List of Threatened Species 2012. IUCN. old-form url
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တောဘဲမန်ဒါလီ&oldid=730779" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၂၊ ၁၂:၀၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။